I-novena luluhlu lweemithandazo ezibhekiselwe kwiintsuku ezi-9 eziqhelekileyo, ngokuqhelekileyo njengomthandazo wokubongoza kodwa ngamanye amaxesha njengomthandazo wokubulela. (Jonga iintlobo zemithandazo eninzi kwimithandazo yokubongoza kunye nokubonga.) Kwiintsuku ezithoba, khumbula iintsuku ezithoba, ukuba abapostile kunye noMariya oyiNtombi uMariya basebenzisa umthandazo phakathi kwe- Ascension ngoLwesine nePentekoste ngeCawa . (Ukudibanisa neenvenya ezininzi ezinokuthi zifumaneke ngezantsi.)
Inkcazo ephosakeleyo: Naluphi na uluhlu lwemithandazo
Nangona igama elithi novena livela kwi-Latin yam, isiqendu esithi "isithoba," eli lizwi liye lisetyenziswe ngokubanzi ukuze libhekise kuyo nayiphi na iluhlu olude lweemithandazo. Ngaloo ndlela, iSaint Andrew Christmas Christmas Novena ifundwa kwiintsuku ezili-9, phakathi kweMthendeleko ka-Saint Andrew (ngoNovemba 30) kunye neKrismesi . Enye i-novena ende eyaziwayo yi-Rosary Novena yosuku lwe-54, eyiyona i-novenas yee- rosari zintandathu ngokulandelelanayo, kunye neyesithathu ekubongeni.
Ezinye iindlela zeLizwi
Ngenxa yokuba i-novenas yindlela ephakamileyo yokuthandaza, abantu abaninzi bayamangaliswa xa beva ukuba babengenalo igosa eliqhelekileyo kwiCawa yamaKatolika kwaze kwaba ngekhulu le-19, xa i-indulgences yayinikelwa i-novenas ethandazela ukulungiselela imihla ngemihla. Kodwa umkhuba wokumakisha iziganeko ezikhethekileyo kunye nexesha elinesithoba lokulungiselela (ngaphambi kwangaphambili) okanye ukukhunjulwa (emva komcimbi) kundala.
ESpain naseFransi, i-novena yokulungiselela yayibonwa ngaphambi komthendeleko weKrismesi, ukuphawula iinyanga ezilisithoba uKristu azichitha kwisibeleko sikaMariya. Kwaye emva kwesithethe samaGrike namaRoma, ukususela kwiintsuku zokuqala, amaKristu akhumbuza ukufa kwamaKristu akanye nawo ngosuku lwesithathu, lwesixhenxe, neyesithoba emva kokufa kwabo.
Ngosuku lwesithoba, i-novena, yayibhiyozelwa njengomthendeleko.
Imizekelo: "Unyaka ngamnye, sithandazela uNevena Mercy onesithoba kwiintsuku ezisi-9 phakathi kweCawa elungileyo kunye neCawa yeNceba .
I-Novenas kuNkosikazi wethu
I-Novena kwiNtsingiselo Yentliziyo kaMariya
Novena kuMariya, Uhlaziyi weNtshontsho
I-Novenas kwiNgcwele Intliziyo
I-Novena yokuThembela kwiNtliziyo engcwele
I-Novena kwiNtliziyo engcwele
I-Novenas kwiMidlo eyahlukeneyo
I-Saint Andrew Christmas Novena
I-Novenas eya kwiiNgcwele ezahlukeneyo
I-Novena kwi-Saint Expeditus
I-Novena kuSt. Charles Borromeo
Novena of Grace kuMoya oyiNgcwele uSte Francis Francis
I-Novena kuSt. Anthony Mary Claret
I-Novena kuSanta Joseph
I-Novena eya kuSaint Joseph uMsebenzi
I-Novena yeMimoya Engcwele kwi-Purgatory
I-Novena kwiNtsapho engcwele
Ukuhlangabezana Nabantu Abanzima Indlela kaThixo
Zamazi Umculi wamaKristu uKari Jobe
Ukubulela Ukutya Kwethu
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala Zase-Italy
Indlela yeDelphi yokuLawula kunye neeParameters eziPhezulu
Abaphumeleli beMidlalo yaseMelika yaseBrithani
Indlela Yokubeka Isandla Senu Sokulandelela kwiGrafu
Ukudlala njani i-Irish I-Golf Ball Tournament Format
Iyiphi indima yabasetyhini kwi-'Wuthering Heights '?